🥇 ▷ Apple waxay xannibaysaa beddelka baytariga iPhone ee shaqsiyaadka ✅
Apple waxay xannibaysaa beddelka baytariga iPhone ee shaqsiyaadka
Apple markasta waa la ahaanayaa hermetic dheeraad ah marka la eego horumarka qaybta gudaha ee marinnada ay ka kooban tahay, maadaama ay aad ugu sii adkaanayso sidii ay awood u yeelan lahayd noo hagaaji ama dhinac saddexaad iPhone ah Waxay leedahay qayb cilladaysan ama shaashad jabtay. Go’aannadan Apple waxaa loo sameeyay sidaa darteed in alaabadaada oo dhan lagu hagaajiyo adiga adeegga farsamada kaliya iyo si gaar ah, laakiin warkani ugu dambeeyay wuxuu dhib geliyay isticmaaleyaal badan.
Sida la sheegay iFixit, bogga caanka ah ee tilmaamaha ku saabsan sida loo dayactiro taleefannada cilladaysan, iPhone XR, XS iyo XS Max hadda waxay na tusi doonaan a fariin ku saabsan macruufka 12 iyo macruufka 13 beta haa waan haysannaa badalay batarigiisii anaga oo matalayna. Farriintan ayaa noo sheegaysa, in kasta oo aan batarigaas u badalnay sarkaal kale oo Apple ah, in aan iska hubinno baytariga maxaa yeelay na siin karin macluumaad ku saabsan iyada barnaamijka softiweerka waxaanna rabnaa in aan mar kale badalno maxaa yeelay waa “cilladaysan”.
Dayactirayaal badan oo aan rasmi ahayn iyo adeegsadeyaal ayaa ogaadey ogeysiiskan, taas oo muujineysa taas adeegga farsamada ee dardargelinta batteriga Apple waa la keydiyaa In softiweerka nafsadooda sidaas darteedna adeegsadayaashu waa inay u soo diraan iPhone-ka Apple si ay u dayactiraan Tani waxay abuureysaa kharashyo badan iyo waqti lumis weyn macaamiisha, sidaa darteed tallaabadani si wanaagsan ugama heli doonto bulshadaada.